Sidee ayuu Klout u shaqeeyaa? | Martech Zone
Lambarada waa muhiim markay tahay suuqgeynta internetka. Waxaan ahaa dhaliil u leh Klout laakiin wali waxaan jecelahay in shirkadaha ay isku dayayaan inay soo saaraan jaangooyooyin fudud si loo go'aamiyo meelaha iyo dadka saamaynta ku leh internetka. Kama dhigayo inaan fahamsanahay dhibcaha Klout aad u badan, mana ka walwalayo sidoo kale sidoo kale.
Laakiin ... waqti ka waqti, waan iska hubiyaa goolasheyda Klout (ka Barnaamijka Klout iPhone aan soo bandhigno!). Haddii aad jeceshahay inaad runti ogaato sida dhibcaha Klout u shaqeeyo, waa kuwan faahfaahinta adiga!
Macluumaad ku saabsan OnlineDegrees.com